AQALO DHAWR AH OO KU SHUF BEELAY DAB KA QARXAY XAAFADA STATE HOUSE KA | Toggaherer's Weblog
Xaafada isku raranta ah ee State House ka ayaa dab qabsaday duhurnimadii maanta oo khasaare balaadhan gaadhsiiyey , aqal soomaliyo dhar ah ayaa ku shuf belay dabkaasi oo kuyaalay xaafadaa dadka danyarta ahi degan yihiin ee State house ka .
Sida dadkaa meesha deganaa sheegeen waxa ay dabku ka dhashay mid ka mid ah guryaha buulasha oo dab ka qarxay ay wax ku karsanayeen taas oo uu gaadhay dhawr buul oo ku hareeraysnaa wax dhimaso ama dhawac ayaan soo gaadhin dadkii deegaankaa ku noolaa taas oo la sheegay in ay nafahoodii ay ka bad baaday.
Dadka u dhaw dhaw ayaa gurmed deg deg ah u bixiyey ilaa markii ugu dambaysay ay ku guulaysteen in ay dabkaasi damiyaan .Dhinaca xukuumada ayaan laga helin wax gurmad ah haba yaraatee intii u socday dabku ilaa ugu dambayntii goor lagu guulastay uu yimid gaadhi deba damis ah taas oo aan waxb xiligaa looga baahnayn. Taasi waxay ku tusinaysaa foojinaan laanta dawlada ee dhinga gurmadka dabka oo had iyo jeer ay ku gubtaan dhismayaan badan magaalooyinka gaar ahaan magaalo madaxda Somaliland ee Hargaysa .
Baaqyo dheer oo mudo badan loo jedinyey xukuumada in ay keenaan deb demes ayaanay haba yaraateen dhego u dhigin.